ကိုင်ရိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်စည်ပြပွဲသည် အာရေဗျဒေသ၏ အကြီးဆုံးနှင့် လူကြိုက်အများဆုံး ဘဏ္ဍာရေးပွဲများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ အကျိုးဆောင်များ၊ သုံးသပ်သူများနှင့် Forex စိတ်အားထက်သန်သူများအား အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပြီး၊ သူတို့၏ အတွေးများ၊ ထင်မြင်ယူဆချက်များနှင့် လဲလှယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံများမျှဝေရန် နေရာတစ်ခုပေးထားပါသည်။ ဒါဟာ Forex ပါပဲ - လူတွေချိတ်ဆက်နိုင်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်တစ်ခု။
အဆိုပါပြပွဲတွင် FBSသည် ပျော်စရာများကြုံခဲ့ရသည်။ လူတော်တေ်ာများများဟာ ကျွန်တေ်ာတို့ ဝန်ဆောင်မှုများကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်: FBS ပင်မရုံးချုပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် မေးခွန်းများဖြေကြာပြီး၊ အကောင်းဆုံးအနေအထားဖြင့် ကုမ္ပဏီကိုတင်ပြသွားခဲ့သည်။ ဧည့်သည်တော်များသည်လည်း သူတို့ကံကိုစမ်းခဲ့ကြသည်: ကျွန်တေ်ာတို့နေရာတွင် iPhone X (သို့) Apple နာရီအပြင် အသုံးဝင်သည့် ဆုလက်ဆောင်များနှင့် အမှတ်တရပစ္စည်းများအတွက် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ရှိခဲ့ပါသည်။
ဖိတ်ကြားထားသူများသည် FBS ရောခ့်စတား သုံးသပ်သူ မစ္စတာ Mostafa Elsaiedyနှင့်တွေ့ဆုံရန် အခွင့်အရေးရခဲ့ပါသည်။ သူသည် ဆွေးနွေးပွဲအများအပြားတွင် ပါဝင်နေပြီး၊ ခရစ်တိုငွေကြေးများအပေါ် တည်းဖြတ်ခဲ့ပါသည် - ထိုစဉ်က အသည်းအသန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့် ဆွေးနွေးမှု။
ဒါပေမယ့် ဒါဟာ တစ်ခုတည်းသော သတင်းကောင်းမဟုတ်ပါဘူး! ကျွန်တေ်ာတို့ဟာ ငွေကြေးဈေးကွက်မှာ “Creativity and Excellence” ဆုဖြင့်လည်း အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ အသွင်အပြင်ဟာ ဝန်ဆောင်မှုလိုပဲ အရေးကြီးပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို စိတ်ချယုံကြည်ရပြီး၊ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ ဟူးရေး! ထပ်တွေ့ပါဦးမယ်၊ ကိုင်ရို!
၁၀သန်းမြောက် ရောင်းဝယ်သူ၏ ဆုလက်ဆောင်အတွက် အချိန်ကျပါပြီ!
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၁၀သန်းမြောက်ရောင်းဝယ်သူကို တွေ့ဆုံပြီး၊ သူရွေးချယ်တဲ့ လက်ဆောင်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါပြီ။ သူဘာတောင်းဆိုလဲ သင်သိပါသလား?